खोप लगाउन नमान्ने सरकारी कर्मचारीको तलव रोकिने, सर्बसाधारणको हुनेछ सिम ब्लक! कस्तो लाग्यो तपाईलाई यो निर्णय? – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ३०, २०७८ समय: ९:२३:५२
पाकिस्तानको सरकारले बिहीबार महामारीका कारण फैलिरहेको भाइरस विरूद्ध खोप लिन अस्वीकार गर्ने व्यक्तिको सिम कार्ड रोक्न निर्णय गरेको छ । प्रान्तीय सरकारले कोविड १९ को तिब्र प्रसार रोक्न र खोप प्रक्रियालाई छिटो पुर्‍याउन जुन जुन १२ देखि सबै वयस्कहरूलाई खोप लगाउने निर्णय गरेको थियो । पंजाबका विशेष स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रवक्ता सय्यद हम्मद रजाले भने, खोप नलिएका व्यक्तिहरूको मोबाइल सिमकार्ड रोक्ने अन्तिम निर्णय लिइएको छ ।
पंजाबका स्वास्थ्य मन्त्री डा. यास्मीन रशीदको अध्यक्षतामा भएको उच्चस्तरीय बैठकले उक्त प्रान्तमा ठूला धार्मिक स्थलहरूको बाहिर मोबाइल खोप शिविर स्थापना गर्ने र कम्तिमा २० प्रतिशत जनसंख्याले खोप लगाएपछि सबै जिल्लामा व्यवसाय पूर्ण रुपमा खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । खोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई सिनेमा हल र रेस्टुरेन्टहरूमा जान अनुमति दिइनेछ र विवाह भवनहरू खोलिनेछ । दीर्घ रोग भएका व्यक्तिहरूलाई अब प्राथमिकतामा खोप दिइनेछ ।
बैठकले भाइरसको फैलावट रोक्नका लागि गरिएका उपायहरुको बारेमा एक ब्रीफिंग दिइयो र यसले भाइरस पुष्टी र मृत्यु दरमा कमी आएकोमा स्वास्थ्य विभागले गरेको कामको सराहना गर्‍यो । केस संख्या घटाउनको श्रेय प्रशासनलाई दिइएको छ ।
पंजाबका मुख्य सचिवले खोप केन्द्रहरूमा अधिकतम सम्भावित सुविधाहरू प्रदान गरिएको बताए । उनले भने कि जिल्लाहरुमा जहाँ २० प्रतिशत जनसंख्या खोप लगाईएको छ, त्यहाँ सबै व्यवसायहरु मास्क लगाउने नियम मानेर खोलिनेछ । खोपको गति बढाउन अन्य कडा उपायहरू मध्ये सिन्ध सरकारले गत हप्ता जुलाईदेखि आफूलाई खोप लिन अस्वीकार गर्ने सरकारी कर्मचारीहरूको तलब रोक्न निर्देशन जारी गरेको थियो ।